Imephu kaGoogle API: Khangela, Tsala kwaye uhlaziye indawo yam | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 30, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Ndithengile iiGoogle Hacks zeMephu izolo kodwa ndiyaphoxeka kancinci kule ncwadi. Ayilotyala lombhali, kodwa le ncwadi intle sele iphelelwe lixesha okoko kukhutshwe uGoocoder kaGoogle kunye nohlobo lukaGoogle lwesi-2 se-API.
Kwakukho amakhonkco ambalwa ezincwadini ngenxa yoko ndakwazi ukukhangela iqela leendawo kwaye ndibone ukuba zikulungele njani ukukhutshwa okutsha. Ndakha ukudityaniswa kwemephu kwindawo entsha endiyakhayo. Inyathelo lokuqala liya kuba lelasekhaya ukuze babeke kwidilesi yabo kwimephu kwaye bahlaziye indawo yabo ukuba umakishi akakho kwindawo efanelekileyo.
Olunye uphuculo endilwenzileyo:
Sebenzisa iV2 Geocoder
Sebenzisa ukusebenza kokutsala kwimephu
Ukuhlaziya ubude kunye nobude kwifom yefom (ezi zinokufihlwa kunjalo)
Ukujikeleza ubude kunye nobude obuchanekileyo kumanani ayi-8
Ukukhubaza ifom ukuze umntu angakwazi ukongeza indawo enye
Cofa apha ukuze ufumane i-DEMO esebenzayo.
Ndiyilele amanqaku am okhetho oluphambili. Nceda ushiye iikhomenti kolu ngeno ukuba 'uboleka' ikhowudi yam okanye ukuba uyayiphucula ngandlela thile. Ndingathanda ukubona into oza kuyenza. Amanyathelo am alandelayo kukuba umsebenzisi akhethe uhlobo lommakishi abaluthandayo kunye nokubeka umfanekiso we-thumbnail kwiwindows info.
Zive ukhululekile ukusebenzisa ikhowudi-unokunikela nge enkosi kwi-Paypal yam.
Dec 23, 2006 ngo-10:50 PM
Ndihambise amanye amaphepha esayithi yam ngeenxa zonke. Oko ndaqalisa Ukulungiswa kweedilesi Ndiye ndalatha naziphi na iimbekiselo kuloo sayithi.
Mar 2, 2007 ngo-3: 44 AM
I-typo encinci kwi-URL http://www.addressfix.com,
Susa i "," kwaye ikhonkco lisebenza 😛
BTW, iprojekthi enkulu. 🙂
Mar 2, 2007 ngo-8: 26 AM
Enkosi, Aswin - ndiyilungisile! Yayiyiprojekthi eyonwabisayo leyo.
Aug 24, 2007 ngo-11:41 PM
Hee, umsebenzi omhle kule projekthi! Utshilo ukuba singaboleka kwaye siphucule ikhowudi, kodwa iphi?
Agasti 25, 2007 kwi-10: 35 AM